Oku kunokuba ngowona mfanekiso mhle wakha wawubona kaSteve Jobs | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi UJason mercier ngomnye umntu oyilayo ekusebenziseni izixhobo zeApple, kwaye mhlawumbi inye kuphela yokukrazula iMac ngomsebenzi wakhe. UMercier uzenzele igama malunga neSan Francisco Bay, ngokwenza mosaic kunye nenkunkuma, ngokuhambelana nosaziwayo babo. Ke xa umzala wakhe wamthuma ukuba enze umzobo womseki we-Apple ongasekhoyo, uMercier wayesazi ukuba kufuneka ayakhe ngeemveliso kunye nezinto imisebenzi ayenzileyo.
Ukusetyenziswa umpu weglu, UMercier wabeka malunga neepawundi ezingama-20 zenkunkuma yekhompyuter ukuyenza, ukwenza umfanekiso obonakalayo weMisebenzi.
Bendingazi okuninzi ngaye, utshilo uMercier weMisebenzi. Ndabona ezinye zeemovie ngaye kwaye banikezela ngokugqibeleleyo. Kungelo xesha ke endaba nomdla kuye.
Kukho inani elikhulayo leefoto elizotywe yimisebenzi eyavela emva kwakhe ukusweleka ngo-2011. Ndizibonile iiTattoos ezingenakubalwa, imifanekiso eqingqiweyo yobhedu, imuvi yeOscar kunye neopera.
Unokuthi umsebenzi weMercier ufana nobugcisa Imacaroni kwii-steroids. Ngapha koko, imifanekiso yakhe yokuqala yenziwa ngayo ioodles kunye neembotyi, kodwa ngokukhawuleza washukuma inkunkuma kunye nezinye izinto ezifunyenweyo. Unemifanekiso emininzi eyenziwe iilekese ezinemibala, njenge ilayisensi y Iipads zerabha.
Ngomfanekiso imisebenzi, kuye kwafuneka ajonge phezulu kwizinto zekhompyuter zabahlobo, kunye nenye uyothenga uyokuthenga Banamaqhosha amadala amaninzi kunye nabangaphakathi abahlukeneyo.
Usebenzisile iiapile eziqhubayo, iimpuku kunye iPod, Kwaye zezinye zezinto ezinamathelisiweyo okanye ezibethelelwe kumzobo weMisebenzi. Ijezi yentamo inenani elikhulu lezinto ezingezizo i-Apple, ezinje nge iifowuni zokusonga iidiliyaMhlawumbi ukukhwaza kwimisebenzi ngetekhnoloji awayezama ukuyenza ngcono, kodwa nangenxa yokuba izinto zazikwimbala emnyama efunekayo iMercier.
1 Iphazili ye-3D
2 Ukhetha 'iNkunkuma yoDumo'
Zininzi iibhodi zesekethe ezaphukileyo, kunye nezinye iziqwenga zombane ezongeziweyo umbala, la ifomkunye imilo yobuso. Umgca womhlathi wenziwa ngamaqhekeza ePhones. Isiqwenga sokugqibela silinganisa 0,9144 mitha yi 1,2192 mitha.
Ndinomfanekiso endifuna ukuwumela, kwaye ke ndiyiphatha njengephazili le-3D, utshilo uMercier. Ndiza kuyilungisa ngombala, ubungakanani kunye nokumila, kwaye ndidlale ngezinto ukuze ndibone eyona isebenza kakuhle.
I-Mercier ngumculi ozifundisayo ozifundisayo, odale "amakhulu" yemizobo enenkunkuma ekugqibeleni 15 iminyaka. Uyaziphilisa ngokuthengisa ngomsebenzi wakhe, esenza nemizekeliso.
Ngenxa yokusebenzisana kwakhe nosaziwayo, UPhyllis Diller wamthumela kwiityhubhu zoxinzelelo zokhilimu onxamnye nokurhawuzelela. UHeidi Fleiss Wayithumela ibhokisi egcwele iinto zokudlala zeentaka ngeposi. Nditsho nomhlekisi Amy Schumer, wazuza njengelifa izixhobo zakhe zamazinyo. Naziphi na izinto zobugcisa zehlabathi azifumeneyo, zajika zaba bubugcisa obunemibala.
Ukhetha 'iNkunkuma yoDumo'
Kodwa Imisebenzi inokuba yititan yakho kwimisebenzi yakho yobugcisa, uxelele iwebhusayithi yeendaba zobuchwephesha 'Recode'Ngo-2014. Ufumana umdla okhulayo kumanani enkcubeko ye-pop, anje "Abafazi basekhaya bokwenyani" kunezo zeteknoloji.
Ndixelelwe Recode ukuba ngelixa engaphezulu komculi obonwayo, umyalezo osemva komfanekiso weMisebenzi ngu "Cinga kabini".
Andinayo ne-iPod, utshilo. Kodwa kukho abantu apho yeyona nto ibalulekileyo emhlabeni. Yisiqwenga nje seplastiki esimhlophe kum, isiqwenga seplastiki esimhlophe esibizayo. Ndiyathemba ukuba izimvo zam azincedi.
UMercer okwangoku unomboniso obizwa ngokuba 'Inkunkuma yodumo' iya kuba kude kube 28 ngoMeyi ngo 'I-111 Minna Igalari'ngaphakathi San Francisco. Jonga le vidiyo ingezantsi ukuze ubone ukuba isebenza njani. Ndiyathemba ukuba ulithandile eli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Oku kunokuba ngowona mfanekiso mhle wakha wawubona kaSteve Jobs
Iibhodi zamabali zomlawuli wefilimu yeqonga uAkira Kurosawa